कस्तो होला कोरोनाभाइरसपछिको समाज– तानाशाही बढ्ला ? हरारी भन्छन्
फरकधार / २९ चैत, २०७६
कोभिड १९ संक्रमणसँग लड्न अहिले विश्वभर सरकारहरुले जुन बाटो छानेका छन्, त्यसले हाम्रो विश्व, समाज र दुनियाँ बदल्ने निश्चित भइसकेको छ ।
यही सन्दर्भलाई पनि मान्छन्, इतिहासकार युवल नोआह हरारी । हरारीको पुस्तक स्यापियन्स– अब ब्रिफ हिस्ट्र अफ ह्युमनकाइन्ड विश्वचर्चित पुस्तक हो ।
यो महामारीपछि विश्व कस्तो होला, कस्तो समाजको कल्पना अहिले गर्न सकिएला ? विश्वका देशहरुबीच एकजुटता बढ्ला कि एकअर्कासँगको दूरी बढ्दा ? नागरिकको उत्पीडन बढ्ला कि उनीहरुलाई सहज होला ?
हरारीले यसबारे भनेका छन्, ‘संकट अहिले यस्तो छ कि हामीले कुनै ठूलो फैसला लिनु पर्ने हुनसक्छ । यो निर्णय तत्काल लिनु पर्ने हुन्छ । तर, हामीसँग विकल्पहरु पनि नभएका होइनन् ।’
प्रकाशित मिति : चैत २९, २०७६ शनिबार १८:५३:१,